Secret COVID-19 study in Italy? | Italy travel news
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Fampianarana miafina COVID-19 any Italia?
Fandinihana miafina COVID-19 any Italia tsy misy miafina hoy i Stefano Merler.
Ny mety hitranga eo anelanelan'ny ankehitriny sy ny 15 Jolay miaraka amin'ny fanokafana voalohany tany Italia omaly dia voarakitra ao amin'ny maodely statistika novolavolain'i Stefano Merler, ilay matematika-epidemiolojista an'ny Bruno Kessler Foundation izay manao ny kaonty ho an'ny Ivon-toerana ambony momba ny fahasalamana sy ny minisiteran'ny fahasalamana .
Ny kajy nomen'i Merler dia: mahatratra 1,200 ireo traboina isan'andro miaraka amin'ny Rt 1.25 izay adika hatramin'ny 1,200-1,300 ireo traboina isan'andro.
Hatramin'ny Febroary 2020, nahazo ny isa marina i Merler.
Komitin'ny manam-pahaizana 24 nanoro hevitra ny governemanta italianina momba ny areti-mandringana, no tapa-kevitra ary nitory ny amin'ny famerana ny fanokafana indray.
Ny kajy nomen'i Merler dia: "Mahatratra hatrany amin'ny 1,200 ireo traboina miaraka amin'ny 1.25 Rt." Ny Rt dia refin'ny hafaingan'ny fielezan'ny virus. Ka i Palazzo Chigi fantatra koa amin'ny anarana hoe Chigi Palace, izay sezan'ny filankevitry ny minisitra sy ny fonenan'ny praiminisitra italiana, dia nandà ilay hevitra “hanafaka ny rehetra”.
Hatramin'ny Febroary 2020, nahazo ny isa marina i Merler. Ny fanadihadiana, izay tsy nasehoan'ny governemanta ampahibemaso velively, fa izay famoahana Il Corriere afaka mamakafaka sy manome amin'ny 16 aprily ao amin'ny Comitato Tecnico Scientifico (CTS), komitin'ny manam-pahaizana 24 nanoro hevitra ny governemanta italianina momba ny areti-mandringana, dia nanapa-kevitra ary nitatitra tao amin'ny Palazzo Chigi mba hanakanana ny fanokafana indray, amin'ny fiheverana fa mampidi-doza loatra izany araka ny angatahin'ilay mpitarika ny antoko Lega, Matteo Salvini.
Ny Rt farany voamarika amin'ny tranga soritr'aretina, manondro ny vanim-potoana eo anelanelan'ny 31 martsa sy 13 aprily, dia 0.81. Ity no teboka fanombohana. Ao amin'ireo vinavina, tsy misy afa-tsy ny kajy, tsy misy na inona na inona hisokatra ary na tsia. Ireo dia safidy an'ny governemanta tarihin'ny Italia Ny praiminisitra Mario Draghi.